घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू लियोन बेली बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
लियोन बेलीको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, बच्चा, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो जमैका फुटबलरको जीवन कहानी हो। Lifebogger आफ्नो बाल्यकालदेखि शुरू भयो जब उनी प्रख्यात भए। तपाईको आत्मकथा भूखमा लाग्नका लागि, हामीले उनको सब भन्दा पुरानो क्षणलाई वयस्कताका लागि तयार गरेका छौं - लियोन बेलीको बायोको उत्तम सारांश।
जस्तै Raheem Sterling - फिर्ता दिनहरूमा - उहाँ युरोपको सबैभन्दा चर्चा गरिएको युवा फुटबलरहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ। यद्यपि, केवल केहि लेओन बेलीको बारे सचेत छ किंगस्टनबाट लेभेरकुसेनमा अराजक वृद्धि। हामीले उसको लाइफ स्टोरी क्याप्चर लियौं र थप कुनै विज्ञापन बिना नै सुरु गरौं।
लियोन बेली बचपन कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, उहाँ उपनाम 'चिप्पी' बोक्नुहुन्छ। लियोन पैट्रिक बैली बटलर अगस्त १91997। को Jama औं दिनमा जमैकाको किंगस्टन शहरमा जन्म भएको थियो। जमैकन एक थोरै प्रख्यात बुबाको रूपमा जन्मेको थियो, जस्तो देखिने मम, र एक धर्मपिता हुनुहुन्छ - क्रेग बटलर।
लियोन बेलीको धर्मपिता बुबा, क्रेग बटलर र उनकी आमालाई भेट्नुहोस्।
लियोन बेलीले आफ्नो बाल्यावस्था कासावा टुक्रामा बिताए जुन क्षेत्र जमैकाको किंग्स्टनको सबैभन्दा हिंस्रक क्षेत्रहरू मध्ये एक मानिन्छ। पछि, गरीबीले सर्वोच्च शासन गर्‍यो, र बेली जस्ता बच्चाहरूलाई ड्रग पेडलर बन्न सजिलो भयो।
भाग्यवस, फुटबलले उसलाई व्यापक डिबचरीबाट भाग्नको लागि प्रस्ताव गर्‍यो। लियोन बेलीले खेललाई धेरै माया गर्थ्यो र कहिल्यै भोको लगायत कुनै चीजको वास्ता गरेन। ऊ आफ्नो खुट्टामा बल छ त्यति नै उनको आमाको खाना चाहन्न थियो। उसको अनुसार:
“फुटबलले मलाई छनौट गर्यो। जबदेखि म जन्मिएको थिएँ, मैले गर्न चाहेको सबै कुरा लात थियो - तपाईंले मेरो अघि राख्नु भएको केही।
म मानिसहरूलाई सधैं भन्दछु कि मैले मेरो आमाको पेटमा शुरू गरेको छु किनकि बाहिर आए पछि मैले सबै कुरा गरिरहेको थिएँ। ”
लियोन बेली परिवार पृष्ठभूमि:
फुटबलरको जीवन कहानी धितोको दागको धेरै उदाहरण मध्ये एक हो। किनभने उसको बुबाआमा गरीब थिए, लियोनले धेरै बाल्यावस्था र युवावस्थाको अभाव देखा पर्‍यो। सत्य यो हो कि यो पूर्णतया इच्छाशक्ति हुन्थ्यो र कहिल्यै मानसिकता छोड्दैनथ्यो जुन उसलाई चलिरह्यो। उनले एकचोटि याद गरे:
“जब म आफ्नो जीवनलाई कासावा टुक्रामा फर्केर हेर्छु, यो सजिलो थिएन, तर त्यो पनि खराब थिएन। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जुन गरिब छ, तर यसले मलाई त्यस्तो मानिसमा परिणत गर्‍यो जुन मैले सोचेको थिइनँ कि मँ बन्छु।
म धेरै सडक स्मार्ट छ। म जीवनलाई विभिन्न पक्षमा बुझ्न सक्दछु र त्यस्तो वातावरणबाट आएकोमा म धेरै कृतज्ञ छु। "
लियोन बेली परिवार मूल:
हामीलाई थाहा छ कि ऊ जमैकाका नागरिक हुन्। यद्यपि उसको जरा क्यारेबियन भन्दा परसम्म पुग्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, हाम्रो अनुसन्धानले उनी अंग्रेजी परिवारको पुर्ख्यौल रहेको संकेत गर्दछ, एक विकास जसले उनी जैविक हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिन्छ।
जवान लियोन बेली जमैकाको किंग्सटन छेउमा हुर्केका थिए।
कसरी क्यारियर फुटबल लिओन बेलीको लागि सुरु भयो:
बेली छ वर्षको उमेरमा, उनी किंग्स्टनको फिनिक्स अखिल-स्टार एकेडेमीमा भर्ना भए। एकेडेमीको स्वामित्व र क्रेग बटलर थियो, जो पछि बेलेको धर्मपिता बुबा बन्ने थियो।
जवान भए पनि, बेली फुटबलको बारेमा गम्भीर थिए र उसलाई के चाहिन्छ भनेर थाहा थियो। जसले उसलाई चिन्थे - उहाँ आफ्ना आमा-बाबुको अनुहारमा दुई तथ्यहरू प्रमाणित गर्नुहुन्छ। पहिलो, उसको ड्राइभ कुनैसँग दोस्रो थिएन र दोस्रो, उसको दर्शन क्रिस्टल स्पष्ट थियो।
फिनिक्स एकेडेमीमा उनका दिनहरू हुँदा अद्भुत फुटबल प्रतिभाको बचपन फोटो।
प्रारम्भिक क्यारियर फुटबल:
केटाको अभियानका लागि धन्यबाद, उनका धर्मपुत्र बुबा क्रेगले उनलाई युरोपमा मुद्दा चलाउन उत्साहित भए। बेली यात्रामा एक्लै थिएनन्। उनी दुई अन्य भाइहरूसँग गए जसमा काइल बटलर (क्र्यागको जैविक छोरा) र केभन एटकिन्सन (अर्को धर्मपुत्र बच्चा) थिए।
जब तिनीहरू युरोपमा आइपुगे, यो जाडोको मौसम हो, उहाँ र उनका भाइहरूसँग परदेशी थियो। जे होस्, केभ्न, काइल र बेली अनुकूलित। उनीहरूले अस्ट्रियाको क्लब लिफरिंगमा भर्ना हुने क्रममा केभन एटकिन्सन युएसके अनिफमा दर्ता भए। काइल बटलर पनि अस्ट्रियन पक्षसँग बसे।
लियोन र उनका भाइहरूसँग युरोपमा भेट्नुहोस्।
लियोन बेलीको जीवनी - फेम कहानी प्रख्यात:
स्पिडस्टरले लिफरिंगमा प्रगतिशील लाभहरू रेकर्ड गरिरहेको थिएन किनभने फिफाले १ rules मुनिका युरोपियन युनियन खेलाडीहरूमा हस्ताक्षर गर्न निषेध गरेको थियो। त्यसैले उनी स्लोभाक पक्ष एएस ट्रेन्किनमा सर्दै थिए, जहाँ उसले २०१ soc मा १ 18 वर्ष नपुगुञ्जेल उसले आफ्नो फुटबलको आकांक्षालाई जीवित बनाए।
के तपाईंले यस जवान केटाको फोटो एएस ट्रेन्किनको समयमा देख्नुभएको छ?
यो त्यही वर्ष हो कि उसले बेल्जियम क्लब गेk्कका लागि हस्ताक्षर गर्‍यो र आफ्नो उडान उडान पहिलो बनायो। २०१//१2015 मा उनको पहिलो अभियानको अन्तमा, जेनेकले उनीहरूको क्यालेन्डर बर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गोलहरू गर्यो।
लियोन बेलीको जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
उत्कृष्ट ट्र्याक रेकर्ड र युवा उमेरको साथ ससस्त्र, बेली धेरै ठूला क्लबहरूको रडारमा थियो। यद्यपि उनी बायर लेभरकुसेनसँग सामेल भए किनकि यसले निफ्टी युवा आक्रमणकारीहरू जस्ता नरम स्थान पाएको थियो काई हयात.
२०१ Bay मा बायर लेभरकुसेनसँग सामेल हुने समय।
आफ्नो नयाँ परिवेशमा बसोबास गरे पछि, 'चिप्पी' बिस्तारै उसको खुट्टा बेअरेनामा फेला पर्‍यो। उनको सफलता २०१//१2017 फुटबल वर्षको दौडान आएको छ जब उनले डाइ वर्क्लेफलाई पाँचौं स्थानमा राख्न र यूरोपा लिगको लागि क्वालिफाइ गर्न मद्दत गर्न ass सहायक र goals गोलहरू दर्ता गरेका थिए।
यति लामो समय सम्म लियोन टीमको सक्रिय हिस्सा रहन्छ, त्यहाँ छन् बायर लेवरकुसेनका लागि कुनै सीमाहरू छैन। सबैलाई धन्यवाद द्रुत रचनात्मकता जुन उसले इंजेक्स गर्दछ, बाँकी हामी भन्छौं, ईतिहास हो।
लियोन बेली डेटि Who को हो?
Chippy प्रेम मा छ। खेलको साथ मात्र होइन, तर आफ्नो प्रेमिका र पत्नीको साथ। उनको नाम स्टेफनी होप हो। उसको प्रेमिकालाई भेट्न गाह्रो हुँदैन किनकि बेलीले उनलाई अक्सर रात र बिदाको लागि आउँछिन्। यस्तो यात्राको साथ, उसले स्पष्ट रूपमा कुनै सुन्दरतामा टाढा जानेको आफ्नो इरादा घोषणा गर्दछ।
लियोन बेली उनको प्रेमिका स्टेफनी होपको साथ।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... स्टेफनी होप केवल एक प्रेमिका मात्र होइन तर बेलीको छोरा, लियो क्रिस्टियानोकी आमा हुन्। यसलाई बा tw्गित नबनाउनुहोस्, बेलीले पछि आफ्नो छोराको नाम भनेन लिओनेल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो। "लिओ" लियोनबाट हो जबकि "क्रिस्टियानो" थपिएको थियो किनकि बेली सोच्दछन् कि यो "लियो" सँग राम्रो संगठित छ।
लियोन बेली लिओ क्रिस्टियानोको साथ क्वालिटी समय खर्च गर्दै।
लियोन बेली पारिवारिक जीवन:
के तपाईं कुनै फुटबल प्रतिभाको नाम दिन सक्नुहुन्छ जुनसँग आणविक इकाई छैन जो मान्छेलाई उसको ख्याल राख्छन् अरुले भन्दा बढी? होईन, होईन। तिनीहरू सबै परिवारहरू, र जमशेन छुट छैन। हामी तपाइँलाई लियोन बेलीका आमा बुबा र भाइबहिनीको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। साथै, हामी बेलीका आफन्तहरूका बारे तथ्यहरू यहाँ उपलब्ध गराउँदछौं।
लियोन बेली एडोप्टिभ फादरको बारेमा:
फेरी, त्यहाँ टेक्निकल dribbler को जैविक बुबा को रेकर्ड छैन। यस नोटमा, आफ्नो जीवनमा बुबाको एकमात्र व्यक्तित्व एक दत्तक बुबा हुनुहुन्छ - क्रेग बटलर। उनी किंग्स्टन, जामियाकामा फिनिक्स ऑल-स्टार एकेडेमीका संस्थापक हुन्।
लियोन बेलीको एक दुर्लभ तस्विर जसले उनको धर्मपिता बुबा, क्राग बटलरसँग
क्रेग बटलरले बेली र उनको धर्मपुत्री भाइ काइल बटलर (क्रागको जैविक छोरा) र केभन एटकिन्सन जीवनमा सफल हुन सुनिश्चित गर्न धेरै त्याग गरेका छन्। जब योजनाको रूपमा काम नगरे पनि, क्रेगको दृढताले केटाकेटीहरूलाई जोगाउन प्रेरित गर्‍यो र अन्ततः कठिनाइमा विजयी भयो।
लियोन बेली आमाको बारेमा:
Speedter को आमा सहयोगी र मायालु छ। त्यसले बताउँछ कि बेली निरन्तर उनलाई उत्कृष्ट छुट्टीको यात्रामा पुरस्कृत गर्न कोसिस गर्दछन्। Speedter सचेत छ कि आफ्नो आमालाई पूर्ण रूपमा तिर्न असम्भव छ। जे होस्, ऊ त्यसो गर्न अभिलाषा राख्छ।
लियोन बेली आफ्नो आमासँग छुट्टीमा।
लियोन बेली भाई बहनहरूको बारेमा:
जमैकामा जन्मेका केवल धर्मपुत्रा भाईहरू छन्। हामीले पहिले उनीहरूको नाम काइल र एटकिन्सनको रूपमा उल्लेख गरेका छौं। तिनीहरू एक अर्काप्रति कठोर वफादार छन् र शक्तिशाली बन्धनहरू साझा गर्छन्। त्यहाँ उनको जैविक भाई बहन को कुनै रेकर्ड छैन।
लियोन बेली नातेदारहरूको बारेमा:
गति dribbler अंग्रेजी हजुरबा हजुरआमा छ। लियोन बेलीका आमाबुवाहरू मध्ये कसले इ England्ल्यान्ड वंशको स्वामित्व दावी गरेको हो भन्ने बारे अझै स्पष्ट छैन। उसका काका, काकी, काकी, भतिजा, भान्जा र भतिजो को पहिचान मा अस्पष्टता को एक कफन छ।
लियोन बेली व्यक्तिगत जीवन:
टेक्निकल ड्रिब्लर हुनु भन्दा पछाडि चिप्पी को हो तालिकाको शीर्षमा लीभरकुसेन शूट हुन्छ? पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हाम्रो जीवनी उनको रमाइलो, मेहनती र डाउन-टू-पृथ्वी व्यक्तिगतको रूपमा राम्रोसँग बोल्दछन् जो रमाईलोको साथ कैरियरको ब्यालेन्स गर्नेमा राम्रो छ।
उसले आफैलाई छुट्टिको लक्जरी अस्वीकार गर्दैन।
फुटबलर पानीमा भोज मनाउने र आराम गर्ने मन पराउँछ। साथै, उहाँ कार्यक्रमहरूमा भव्य उपस्थितिमा ठूलो छ। साथै, ऊ परिवार, खास गरी आफ्नो छोरासँग गुणस्तरीय समय बिताउन गुमाउँदैन।
लियोन बेली जीवनशैली:
हामी कसरी Speedter बनाउँछ र आफ्नो पैसा खर्च गर्छ भनेर कुरा गरौं। सुरुमा उसले साप्ताहिक तलब €€,००० कमाउँछ। साथै, उसको कुल सम्पत्ति २.75,000 मिलियन डलर (२०२० अनुमान) हो।
यस्तो महत्त्वपूर्ण मासिक तलबको साथ, बेलीले आफूलाई जीवनको आनन्दलाई अस्वीकार गर्दैन। तपाईं आफ्नो महँगो घर को ग्यारेज मा कारहरु देखेको छ? तिनीहरू दर्शनीय छन्। उनी जीवनशैलीका युवा फुटबलरहरूले सपना देखेर बाँचिरहेका छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।
वि the्गरले आफ्नो सुपर विदेशी कारबाट बाहिर निस्केर हेर्नुहोस्।
लियोन बेलीको बारेमा तथ्यहरू:
यो लेख उनको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा लपेट्न, यहाँ उनको बारेमा सानो सत्य छन्।
आय / अवधि
प्रति वर्ष: € 3,900,000
प्रति महिना: € 325,000
प्रति हप्ता: € 75,000
प्रति दिन: € 10,714
प्रति घण्टा: € 446।
प्रति मिनेट: € 7.43
प्रति सेकेन्ड: € 0.12
तपाईं लेओन बेली को हेर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १ - उहाँको उपनाम को बारे मा:
वि wonder्गरलाई चिप्पी किन भनिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्नुहुन्छ? उसको बुबाले उसलाई उपनाम दिनुभयो किनभने उनी फिल्म चिपमन्क्सबाट चरित्र एल्विन जस्तो देखिन्थे। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, केवल परिवार र साथीहरू मात्र उसलाई नजिकबाट बोलाउँदछन्।
जस्तै अलास्सा खुशी, लियोन एक गरीब समग्र रेटिंग बाट ग्रस्त छ - एक उपलब्धि जुन बुन्डेस्लिगा स्ट्राइक बलको लागि राम्रो बोल्दैन। उसको 85 84 को सम्भावना विger्गरको लागि थोरै निष्पक्ष छ जो दुबै खुट्टामा छिटो, स्किलिफुल, इन्सिसिभ छ। हामीलाई विश्वास छ कि 90 XNUMX/। ले उसको अद्भुत क्षमताको सम्बन्धमा वर्तमान वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्दछ।
थोरै निष्पक्ष, तर राम्रो हुन सक्छ।
बेलीले आफ्नो धर्ममा कुनै संकेत छोडेका छैनन। उनले पिचमा प्रवेश गर्दा आफैलाई पार गर्दैनन् र प्रार्थनाहरू बडबडिएको देखिएको छैन। यद्यपि त्यहाँ लियोन बेलीका आमाबुबा इसाई छन् भन्ने सम्भावना धेरै छ, विशेष गरी जब उसले आफ्नो छोरा क्रिस्टियानो राखे।
तथ्य # १ - Usain बोल्ट संग मैत्री:
चिप्पी र उसैन बोल्ट दुबै जमैका हुन्। थप रूपमा, दुबै खेलाडीहरू नजिक छन्, र बेली पहिलेका धावक कती सहयोगी छन् भनेर देखाउँदै लाज मान्दैनन्। तिनीहरू दुबै सर्वश्रेष्ठ एथलीटहरू हुन् जो क्यारिबियन टापुबाट आएका छन्।
“म भन्छु हामी साँच्चिकै नजिक छौं। उसैन बोल्ट मसँग सँधै थिए। साथै, उसले जीवनको पाठ धेरै सिकायो। बोल्ट एक रमाईलो मान्छे र साथमा रमाईलो छ। "
फुटबलर पदक विजेता sprinter साथ, Usain बोल्ट।
लियोन बेलीको बाल्यकालको कहानी र जीवनीमा यस जानकारीमूलक अंश पढ्नको लागि धन्यबाद। हामी आशा गर्छौं कि यसले तपाईंलाई विश्वास गर्न हौसला प्रदान गर्दछ कि दृढता कठिनाइलाई जित्नको लागि कुञ्जी हो। जस्तै बेलीले कहिल्यै आफ्नो परिवर्तनको क्यारियर छोड्दैन जुन countries देशहरूमा फैलिएको छ।
मिडफिल्डरका अभिभावकहरूको प्रशंसा गर्न अब हामी behooves। यसमा उनका धर्मपिता पिता क्रेग बटलर, तिनका दाजुभाइहरू र परिवारका अन्य सदस्यहरू शब्द र कार्यहरूमा उनको क्यारियरको समर्थनको लागि समावेश गर्दछ।
Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक जस्तो देखिदैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्न राम्रो गर्नुहोस् वा जमैशियनको बारेमा तपाईंको विचारहरूमा तल टिप्पणी दिनुहोस्।
लियोन बेलीको विकी:
तपाईंको जीवन कहानी भूख मेट्न, हामी एक तालिका मा उनको जीवनी संक्षेप छ।
पूर्ण नामहरू: लियोन पैट्रिक बैली बटलर।
जन्म मिति: अगस्त १91997। को नौौं दिन।
जन्मस्थान: जमैकाको किंगस्टन शहर।
सेमी मा उचाई: १178 सीएम।
अभिभावक: क्रेग बटलर (धर्मपुत्र बुबा)
Siblings: काइल र एटकिन्सन (धर्मपुत्र भाइहरू)
प्रेमिका: स्टेफनी होप।
रुचि: पार्टिसि and र गुणस्तर समय परिवार र साथीहरूसँग खर्च गर्दै।
नेट मूल्य: € २.2.3 मिलियन (२०२० अनुमान)।